I-China Mineral Fiber Ceiling BC004 kumzi mveliso kunye nabavelisi | Beihua
Uyilo lwebhodi yezamaminerali luyakwazi ukuphucula ukusetyenziswa kwemithombo yokukhanya engathanga ngqo, iphucule ukusebenza kakuhle kokukhanya kwayo yonke inkqubo yokukhanyisa, inciphise ukugqama kunye nezithunzi, kwaye yenze umbono ukhululeke ngakumbi.
Isebenzisa uboya beminerali njengeyona nto iphambili ekuveliseni imveliso, uboya beminerali buye baphuhlisa ii-micropores ukunciphisa isandi sokuhanjiswa kwesandi, ukuphelisa i-echo, kwaye bahlukanise nengxolo edluliselwa ngumgangatho.
Intsebenzo yokuthwala isandi eyi-NRC ingaphezulu kwe-0.5, enokuthi yandise umsebenzi wesakhiwo, iphucule imeko yendawo yesakhiwo, kwaye iphucule umgangatho wobomi babantu. Ilungele iiprojekthi zobuchule ezinje ngezakhiwo zeofisi, iihotele, izibhedlele, iibhanki, iinkundla, izikolo kunye namanye amaziko, iipaseji zikawonkewonke, indawo yokuhlala ephezulu, iiholo zeshishini, iiwadi, amagumbi okusebenzela, amagumbi enkundla kunye nezinye iiprojekthi zobuchule, kunye namagumbi okwamkela iindwendwe. iiofisi, amagumbi enkomfa kunye nezinye iindawo ezihonjiswe ngokufanelekileyo.
Ukuncitshiswa kwengxolo yeNeC eyaneleyo sisalathiso sovavanyo esibanzi esilinganisa amandla okufumana isandi kwento ethile kwindawo evaliweyo. Ukuphakama kwe-NRC, isandi esincinci siyabonakala sibuyele kwisithuba. Ngokuchasene noko, isandi sihlala sibonisa endaweni yokwenza i-reverberation, nesiphumo sokudinwa kwengxolo yangemuva. Ngenxa yokuqonda kwendlebe yomntu, kuphela xa i-NRC ifikelela kwi-0.5 okanye ngaphezulu, iindlebe zomntu zinokuziva kunciphiswa kwengxolo. Uvavanyo lubonakalisile ukuba imizimba edibeneyo yesandi efunxa isandi, ezinje ngepaneli zoboya ezimaminerali ezifunxa isandi, kunye neepaneli zentsimbi ezineelaythi ezithatha izandi zasemva komnyhadala zinomgangatho ophakathi wokufumana isandi. Iiphaneli ezithatha isandi ezifana nebhodi engagalelwanga yibhodi ye-gypsum, i-calcium silicate board kunye nebhodi yentsimbi phantse ayinasiphumo. Iiphaneli ezinesandi zokuthambisa isandi ezifana neebhodi zokuhanjiswa kwe-gypsum azenzi kakuhle kwizandi ezisezantsi.
Ukulungelelaniswa kwengxolo NRC kubaluleke kakhulu kuyo nayiphi na indawo ebiyelweyo. Ixesha lokuphinda ubhatale kunye nenani lengxolo kufuneka liqwalaselwe kwezi meko zilandelayo:
Iofisi evaliweyo, igumbi lokuhlangana
Vula / vala indawo e-ofisi exubeneyo
Umdlalo wekhaya, indawo yomsebenzi
Iklasi / imeko yokufunda, indawo yokuzivocavoca, iresityu
Indawo yonyango, enjenge: iholo yokwamkela, igumbi lokubonisana, iofisi kagqirha, njl njl.
Imeko yokuthengisa, enye imeko yenkonzo yabathengi, njl.
Edlulileyo: I-Mineral Fibre Ceiling BH003
Okulandelayo: I-Mineral Fibre Ceiling BH002